Japana: Manamasina ny finamananareo aho · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Novambra 2010 10:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Ho an'ireo izay mijery manokana ny sokajin'olona ara-sosialy, nisy iray vaovao indray noforonina: ny ‘mpivady mpinamana’.
Ny teny tomo-fuhfu (ara-bakiteny ny tomo midika hoe ‘mpifanila na namana’ ary ny fuhfu ‘mpivady’) no teny vaovao noforonin'ny mpanoratra Megumi Ushikubo mba hanondroana ireo olon-droa izay niaina tamin'ny toerana roa nifanalavitra ary tsy misy ifandraisany ankoatra ny fanambadiana sarintsariny, indraindray misy zanaka, fa tsy misy ankoatr'izay. Mety tsy mifankahita mandritra ny fotoana lava dia lava ireo ‘namana’ mivady, tsy misy fotoana iarahany ary mety tsy manao firaisana ara-nofo.
Tao amin'ny bokin'i Ushikubo farany, Tada Tomo-fuhfu no Riaru (Ny zava-marina momba ireo ‘mpivady mpinamana ihany’) no nipoiran'ity sokajin'olona ity voalohany, izay, araka ireo fandinihana nataony tamin'ny fanadihadiana mpivady Japoney am-polony maro, hanadihadiany momba ny toetry ny fanambadian'ireo izay nanapa-kevitra ny hanambady olona iray izay mendrika kokoa ny ho namana toa izay olon-tiana, noho ny tombon-tsoa ihany. Ity boky ity koa dia mitanisa ny zava-niainan'ireo mpivady izay niafara ho ‘mpivady mpinamana’ noho ny fahafatesan'ny fitiavana, na ny tsy fisian'izany mihitsy.
Sarin'i Mr Hayata. CC license
Naneho hevitra momba ny zavatra sasany hita ao amin'ny boky ny vehivavy mpitoraka blaogy iray ary nilaza fa nampindraminy an'ny vadiny izany.
Natahotra aho raha namaky fa …
“Telo taona aorian'ny ahateran'ny zaza iray dia maty ny fitiavana ho an'ny lehilahy” booo.
“Mandritra ny fitaizana ny zaza dia mihevitra ny [vehivavy] sasany fa tsy misy ilàna azy ny lehilahy” mmm.
“Zatra mitondra tena tahaka ny zaza ny lehilahy” aaaaandray.
Indraindray aza tsy telo taona fa telo volana dia manomboka mipoitra ireo fambara loza ireo. Tsy misy hanihany mihitsy amin'izany.
Nandritra ny taona vitsy farany teo, maro ireo tahaka an'i Ushikubo (izay nanoratra ihany koa ny boky lehilahy sarim-bavy [en]) no niezaka nanome anarana ireo fahazarana izay nipoitra avy tamin'ny fiaraha-monina Japoney: ny lehilahy “heterosexual” izay tsy dia liana loatra amin'ny vehivavy dia nosokajiana ho “herbivore” [en] ary ny andian-teny toy ny hoe “fikatsahana fanambadiana” [en] dia lasa fomba fiteny andavanandro.
Toa fampirantiana hafa ny Tomo-fuhfu ka ny fotoana ihany no manapaka hoe resaka fivarotam-boky sy fisarihana mpanjifa ho an'ireo orinasa fotsiny ity, na mariky ny fiovàna goavana dia goavana amin'ny fiaraha-monina.
Araka i yomo ity fomba fijery vaovao ny fiainam-panambadiana ity dia avy amin'ny taranaka taty aoriana, izay ieritreretana fa efa azo ny fitovian'ny zara, ary tokony samy hanana ny toerany sy ny fotoany ny tsirairay.
Azo antoka fa mpivady ry zareo saingy manana ny zo amin'ny fananany ny andaniny roa amin'ny zavatra isan-karazany ao anaty vata fampangatsiahana. Raha lazaina tsotsotra dia hoe, misy ny anarany eo amin'ny sakafony.
Na dia monina amin'ny faritra iray mitovy aza ry zareo, mety ho misaraka trano. Izany no antsoina hoe ‘fanambadiana “weekend”’ izany hoe rehefa amin'ny fialan-tsasatra na rehefa malalaka dia mety ho afaka ho any amin'ny andaniny ny ankilany.
Ny antony dia mety hoe tsy te-ho voaelingelina izy amin'ny asany na samy tsy misy manaiky ho voasakantsakana amin'ny fahalalahany, sns.
Nefa tsy azo lazaina hoe ratsy na tsy ampy ny fifandraisany, fa aleo lazaina hoe mpivady mila fahalalahan ry zareo mba ahafahany mifankahazo.
Voavakiko tany ho any fa fomba fisaina tena lojika izany, mifototra amin'ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy izay niova.
Sarin'i Naoya Fuji. CC License
Matetika ny adihevitra momba ny mpivady mpinamana no miteraka fanehoan-kevitra amin'ny fanadihadiana momba ny fiainana ara-nofon'ireo mpivady Japoney sy ny fahambanian'ny taham-piterahana any amin'ny firenena. Misy blaogy ohatra, mitatitra [ja] fa iray am-pahatelon'ireo mpivady no tsy manao firaisana ara-nofo, raha ny iray indray mitatitra [ja] fanadihadiana nataon'ny orinasa mpanao fimailo Durex izay milaza fa tamin'ny 2008, Japan no firenena farany tsy mavitrika indrindra amin'ny resaka firaisana ara-nofo tamin'ireo firenena 26 nalahatra.
Na dia toa sarotra aza ny mahazo antontanisa azo antoka momba izany, nilaza i ayikes fa ny tsy fahampian'ny firaisana ara-nofo no iray amin'ireo toetoetry ny tomo-fuhfu.
Raha hazavaina hoe mpivady tahaka ny ahoana izany:
・samy tia mandany fotoana irery izy roa
・tsy mieritreritra zavatra tahaka ny hoe ‘miaraka foana ary n'aiza n'aiza’
・rehefa mitsidika ny tanin-drazany izy, na dia efa manan-janaka aza dia samy mitsidika ny tanin-drazany avy
・raisina an-tanandroa ny fanambadiana “weekend” na fanambadiana arak'asa
・matetika ny lehilahy dia ‘herbivore‘ milay (eto ny milay dia midika fa mandray anjara amin'ny fanabeazana ny ankizy izy)
・rehefa ilaina ihany ny manan-janaka izay vao miara-matory sy misy ny fifampikasohana ara-batana
・mazava ho azy fa samy miasa izy roa
・raha miara-monina izy roa dia voazara mazava tsara ny faritra atokana ho an'ny lehilahy sy ny an'ny vehivavy
Na dia azo lazaina hoe “mangatsiaka” aza ny mpivady ahitàna soritra ny sasany amin'ireo voatanisa ireo, manohy ny mpitoraka blaogy fa valin'ny filàna ara-sosialy manokana izany fomba fijery ny fanambadiana izany.
Any Japana ny fifanarahana toa izany dia valinteny tsara sy azo antoka ho an'ireo fitakiana ara-sosialy.
Satria ianao manam-bady, azo atokisana kokoa ianao ary omena andraikitra manokana hitsaràn'ny manodidina anao ho “normal”.
Hafa ny fomba fijerin'ny olona anao dia tsy hisy intsony ny fanontaniana tahaka ny hoe; “efa manam-bady ve ianao?, fa maninona ianao no tsy manambady?, ngah ianao tsy mahazo?” apetraky ny ray aman-dreny, ary koa ny fianakaviana, ireo tapaka sy namana, talen'ny orinasa sy mpiara-miasa, mpiray vodirindrina tsy fantatra, ary tsy hahatsapa eno ho hafahafa intsony ianao ho an'ny zavatra toa izany.
Ho an'ireo tsy te-hanambady, tsotra fotsiny ny vahaolana tsara indrindra, ny ‘mpivady mpinamana’.
Mahalana ny mpivady mpinamana no misy fepetra tahaka ny hoe ‘tsy maintsy Atoa. X na Rtoa X”.
Ary tsy ilaina ny filazàna hoe ‘Hotiaviko mandrakizay ianao’, satria mpinamana fotsiny izy roa.
Tsy ilaina ny manohana na mamatsy ara-bola ny ankilany satria mpinamana ihany.
Ny lehilahy tokony ohatr'izao, ny vehivavy tokony ho toy ity … tsy mihatra intsony ny lalàna ntaolo be toa izany, satria mpianama fotsiny ry zareo.
Afaka manana toerana mitovy izy roa ao amin'ny fifandraisany, afaka mifampiresaka sy mifanontany, satria mpinamana.
Samy hanome lanja ny fomba fiainany avy izy roa ary hiara-paly, satria mpinamana.
amy manana anjara amin'ny raharaha an-trano, satria mpinamana.
Raha maratra na marary ny iray dia hikarakara na hokarakaraina ny ankilany, satria mpinamana.
Ka ahoana ny hevitrao? Tsy dia ratsy loatra e?